Abjady - Wikipedia
Ny abjady na abidin-drenisoratra dia abidy tsy ahitana afa-tsy renisoratra. Tsy misy ny zanatsoratra ka fantarina an'eritreritra fotsiny ny zanapeo arakaraka ny fifehezan'ny mpamaky ny firafitry ny feo ao amin'ilay fiteny soratina amin’ny alalan'io abidy io. Ny abjady misy amin’izao fotoana izao dia ny abidy hebreo sy arabo ary siriaka izay nipoitra avy amin’ny abidy fenisiana na arameana izay avy amin’ny abidy protosinaitika.
Manoratra avy an-kavanana miankavia rehefa mampiasa ireo abjady ireo. Ny abjady ogaritika ihany no ampiasaina avy an-kavia miankavanana. Tamin'ny fampiasana ny abidy fenisiana sy protosinaitika anefa dia fanao ny manoratra avy ankavia miankavanana avy eo avy ankavanana miankavia, dia toy izany hatrany.
Ny fanoratana ny ireo fiteny semitika (arabo, hebreo sns), dia mampiasa abjady ahitana zanapeo lava soratana amin’ny alalan’ny atao amin'ny teny latina hoe matres lectionis (ara-bakiteny: "reni-vakiteny"), fa ny zanapeo fohy kosa dia tsy atao toy izany. Na dia misy aza mari-tsoratra azo anehoana ny zanapeo fohy, sahala amin’ny nikoda (nikkud) anoratana ny zanapeo amin'ny fiteny hebreo sy ny harakaty (ḥarakāt) anoratana ny zanapeo ao amin'ny fiteny arabo, tsy an-tery ny fampiasana azy ireo sady tsy fahita afa-tsy amin’ny tranga mahalana. Ny teny latina hoe mattres lectionis dia manondro ny fampiasana ny renisoratra sasany hanehoana ny zanapeo lava.
Ao amin’ny abidin-drenisoratra dia matetika miovaova endrika ny litera arakaraka ny toerany ao amin’ny teny soratana: ny litera hita eo am-piantombohan’ny teny soratana sy ny hita eo afovoany ary ny mipetraka any am-paran-teny dia mety misy fahasamihafan'endrika na dia mitovy aza ny feo mifandraika aminy.
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Abjady&oldid=972062"
Voaova farany tamin'ny 10 Jolay 2019 amin'ny 10:26 ity pejy ity.